म्यापिG्गिस पाठ्यक्रमहरू: त्यहाँ उत्तम छ। - Geofumadas
जनवरी, 2014 ArcGIS-ESRI, शिक्षण CAD / जीआईएस, जियोस्पाटियल - जीआईएस, qgis, धेरै
MappingGIS, हामीलाई एक रोचक प्रस्ताव को बाहेक ब्लग, यसको व्यापारिक मोडेल भौगोलिक तथ्याङ्कका विषयहरूमा एक अनलाइन प्रशिक्षण प्रस्तावमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
२०१ 2013 मा मात्र, २२ 225 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले आफ्ना पाठ्यक्रमहरू लिए, जुन मलाई विचार लाग्ने संख्या हो, जुन प्रयास दुई उद्यमीमा छ कि जसले यो एक बर्ष भन्दा अलि धेरै सुरू गरे। त्यसैले हामी तपाइँको पहल प्रमोट गर्न २०१ 2014 को सुरूवातको फाइदा लिन्छौं।
ArcGIS 10 को लागि अनलाइन पाइजोन कोर्स।
GIS कार्यहरू स्वचालित गर्न र स्थानिय जानकारी सञ्चालन गर्न स्क्रिप्टहरू कसरी सिर्जना गर्ने सिक्नुहोस्
यससँग तपाईंले सुखद र सहज तरिकामा पायथन प्रोग्रामिङ भाषा प्रयोग गर्न सिक्नु हुन्छ। यो कोर्स ArcGIS को नियमित प्रयोगकर्ताहरु को उद्देश्य छ जो एक कदम अगाडी जानना चाहते हो, सूचना प्रबंधन कार्य स्वचालित, geoprocessing र मानचित्रण पीढी को बारे मा जानना चाहते हो।
यस कोर्समा तपाइँले सिक्न सक्नुहुनेछ, चरणको चरणमा:
पाइथन प्रोग्रामिङ भाषासँग अनबप गर्नुहोस्।
तपाईंको आफ्नै लिपिहरू भण्डारण गर्न तिनीहरूलाई GIS प्रक्रियाहरू जुन अघि हातमा राखिएको थियो।
GIS सामग्रीमा सूचीहरू, रिपोर्टहरू र प्रश्नहरू सजिलै उत्पन्न हुन्छन्।
जानकारीको ठूलो मात्रा प्रबन्ध गर्न सानो GIS अपरेसनहरू प्रदर्शन गर्न चरण।
प्रबंधन र नक्सा को मानचित्रहरु र ArcGIS को शुरुवात बिना नक्शे को श्रृंखला पीढी।
वेब म्यापिंग अनुप्रयोग विकास को अनलाइन कोर्स।
संग एक पुरा geospatial वास्तुकला बनाउनुहोस् OpenGeo Suite
यस कोर्सले सबैलाई लक्षित गर्दछ जुन नक्साको वेब अनुप्रयोगहरू विकसित गर्न चाहान्छ जुन खुल्ला स्रोत सफ्टवेयरको साथ, डाटा आयात, यसको व्यवस्थापन र ओजीसी मानकहरू पछि वेबको माध्यमबाट प्रकाशन गर्ने माध्यमबाट।
स्थानिक डाटाबेस सिर्जना गर्नुहोस् र PostGIS सँग स्थानिक विश्लेषण प्रदर्शन गर्नुहोस्।
GeoServer सँग स्थानिय डाटा सेवाहरू लोड गर्नुहोस् र सिर्जना गर्नुहोस्।
नक्शा रचना गर्नुहोस् र GeoExplorer सँग वेबबाट शैलियों सिर्जना गर्नुहोस्।
GeoWebCache सँग नक्सा छविहरूको क्यास अनुकूलन गर्नुहोस्।
अनुकूलित वेब म्यापिङ अनुप्रयोगहरू OpenLayers र Leaflet सँग सिर्जना गर्नुहोस्।
वास्तुकला सुरक्षित गर्न र सबै सजिलो बनाउनका लागि भू-जेएसएसओ फाइलहरू सिर्जना गर्नुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्।
जीआईएस विशेषज्ञ अनलाइन कोर्स: आर्कजीआईएस, जीवीएसआईजी र क्युजीआईएस।
विश्वभर श्रम बजारमा तीन भन्दा बढी व्यापक र मागिएको डेस्कटप GIS क्लाइन्टहरू व्यवस्थापन गर्न सिक्नुहोस्।
यो जसमा तपाईं symbology र लेबलिंग, छाप्न र अनलाइन प्रकाशन को लागि संरचना नक्सा, geoprocessing उपकरण र मोडेल बिल्डर सिर्जना गर्ने, जीआईएस रेखापुंज र सदिश, अनुमानहरु, टोपोलजी नियम, सम्पादन काम गर्न सिक्न पूर्ण पाठ्यक्रम हो ArcGIS, QGIS वा घाँस, आदि मा gvSIG sextant
ArcGIS, gvSIG र QGIS को इन्टरफेस जान्नुहोस्।
तहहरू र बाह्य सेवाहरूसँग काम गर्नुहोस्।
स्थानिय डेटा सम्पादन गर्नुहोस्।
समन्वय प्रणाली र भौगोलिकरण रास्टर छविहरूसँग काम गर्नुहोस्।
सिम्बोलोजी र लेबलिंग सिर्जना गर्नुहोस्।
नक्शा रचनाहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
Geodatabases र टोपोलोजी बनाउनुहोस्।
स्थानिक विश्लेषण प्रदर्शन गर्नुहोस्।
SEXTANTE सँग काम गर्नुहोस्।
नक्साहरू अनलाइन प्रकाशित गर्नुहोस्।
स्थानिय डेटा आधारहरु को अनलाइन पाठ्यक्रम: PostGIS।
PostGIS खुला स्रोत स्रोत स्थानिय डेटाबेस प्रबन्ध गर्दछ।
यस कोर्समा तपाईलाई आवश्यक पर्दछ: डाटाबेसमा आकारफाइल कसरी आयात गर्ने हो? प्रश्नहरू कार्यान्वयन गर्दा प्रतिक्रिया गति कसरी गति लिन्छ? स्थानिय विश्लेषण कसरी गरिन्छ? किन ज्यामिति प्रकार र भौगोलिक प्रकार छ? PostGIS मा के छ डेटा को कसरी हेर्नुहोस?
यसबाहेक, तपाईं विधिवचन जान्नुहुनेछ, चरण द्वारा चरण:
PostgreSQL + PostGIS कसरी स्थापना गर्ने?
डेटाबेस कसरी बनाउने र स्थानिय क्षमतासँग प्रदान गर्नुहोस्
स्थानिय डेटा कसरी लोड गर्ने
पोस्टगिसमा भण्डार गरिएको डेटा कसरी अवलोकन र पहुँच गर्ने
त्यहाँ कस्ता ज्यामिति छन्
म स्थानिक विश्लेषण कसरी प्रदर्शन गर्दछु र स्थानिक प्रकार्यहरू के हो
परामर्श कसरी जरुरी छ
रेस्टर डेटासँग कसरी कार्य गर्ने?
OpenStreetMap डाटाको साथ कसरी काम गर्ने
ArcGIS अनलाइन पाठ्यक्रम।
विश्वभर श्रम बजारमा सबैभन्दा ठूलो र डेस्कटप GIS क्लाइन्ट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सिक्नुहोस्।
यो जसमा तपाईं geodatabases र टोपोलजी, संरचना नक्सा बनाउन संग मुद्रण र प्रकाशन वेब दर्शकहरूको लागि, जीआईएस रेखापुंज र सदिश, सम्पादन, symbology र लेबलिंग, अनुमानहरु, georeferencing, geoprocessing काम गर्न सिक्न पूर्ण पाठ्यक्रम हो ArcGIS अनलाइन।
यस कोर्समा तपाईले सिक्न, कदमद्वारा कदम:
भौगोलिक डेटा कसरी सम्पादन गर्ने?
तालिकाहरूसँग कसरी सञ्चालन गर्ने
समन्वय प्रणालीको साथ कसरी काम गर्ने
भौगोलिक हस्तान्तरण तस्बिरहरू कसरी
ArcToolbox उपकरणहरू कसरी चलाउछ
मोडेलबल्डरसँग विश्लेषण कसरी गर्ने?
सिम्बोलोजी र लेबलिंग कसरी सिर्जना गर्ने
स्थानिय विश्लेषकसँग रास्टर विश्लेषण कसरी गर्ने?
Geodatabases कसरी सिर्जना गर्ने
माथिल्लो नियमहरू कसरी सिर्जना गर्ने
ArcGIS अनलाइनसँग नक्साहरू कसरी अनलाइन प्रकाशित गर्नुहोस्
QGIS को अनलाइन पाठ्यक्रम।
सिक्नुहोस् सबैभन्दा शक्तिशाली कसरी व्यवस्थापन गर्ने र श्रम बजारमा विश्वभरको श्रम बजारमा खुला स्रोत डेस्कटप जीआईएस सफ्टवेयरको माग गर्यो।
यो एक पूर्ण पाठ्यक्रम हो जसमा तपाईं रेस्टर र वेक्टर भौगोलिक जानकारी, प्रक्षेपण, सम्पादन, सिम्बुलोजी र लेबलिंग, नक्साका लागि मुद्रण, भू-प्रसोधन, GRASS, अनलाइन प्रकाशन, आदि संग काम गर्न सिक्न सक्नुहुन्छ।
GIS के हो?
QGIS इन्टरफेस। प्रणाली समन्वय गर्न परिचय।
सिम्बोलोजी र लेबलिंग।
जानकारीको उत्पत्ति र तालिकाहरूको सम्पादन।
QGIS मा GRASS को एकीकरण।
मुद्रण र अनलाईन प्रकाशनको लागि नक्साको जेनरेट।
स्थानिय डेटाबेस संग एकीकरण: PostGIS।
पाठ्यक्रमहरू भर्चुअल कक्षाकोठामा काम गर्दछ, ताकि तिनीहरू कुनै पनि समयमा र २ 24 घण्टा पहुँचको साथ लिन सक्दछन्। र हामी यो चाखलाग्दछौं कि कसरी उनीहरू ब्लगको फाइदा लिन्छन् र तिनीहरूको पाठ्यक्रमको गुणस्तरको प्रदर्शनको रूपमा तिनीहरूको मेलिंग सूची।
MappingGIS पाठ्यक्रमहरूमा जानुहोस्
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो 1922 मा विश्वको नक्सा कसरी थियो
अर्को पोस्ट BlogPad - आईप्याड को लागी WordPress सम्पादकअर्को »
२ जवाफ "म्यापिG् GIS कोर्सेस: त्यहाँ उत्तम छ।"
म तिमीलाई भन्छु, बालक
यो एक सम्मान हो जुन तपाईंले हाम्रो पाठ्यक्रमको साथ यस्तो पुरालेख लेख्नुभयो। हामी अत्यन्त कृतज्ञ छौं। धन्यवाद धेरै धेरै!